Wasiirada Mustafe Cagjar oo noqday jug-jug meeshaada joog - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Wasiirada Mustafe Cagjar oo noqday jug-jug meeshaada joog
Madaxweyne ku xigeenka Somali galbeed Mustafe Cagjar oo shalay dib loo doortey ayaa soo bandhigey gole wasiiro oo aan waxba ka duwanayn kuwii hore u jirey, waxana jira dhowr qof oo cusub. Tirada wasiirada ayaa weliba xad dhaafa.
Sidii caadiga ahayd waxa boosaska muhiimka ah uu ku taxay beeshiisa halka beelaha u dhigma sida Samaroon lagu cabay oo hal wasiir oo quudha loo soo tuurey. ”Samaroonku iyagaa halkaa is dhigey ayuu qabaa Xirsi Warfaa waxay Somali galbeed ka yihiin boqolkiiba 20.
Cad quudha looma soo tuureen hadday is muujin lahaayeen haddase in Ogaadeena sidan u yaso iyagaa u ogolaaday laakiin marka bulsho is yasto iyadana waa la yasi ayuu raaciyay Xirsi Warfaa.
”Tusaale waxa kuugu filan sida ay ku yihiin maamulka Somalilaan oo noloshoodu ay ku xiran tahay Hargeysa iyo Berbera ayuu yiri Xuseen Warsame.
Marka Ogaadeenku waa la socdaan arimaha ku xeeran waxayna ka muujiyeen golaha wasiirada. Bal fiiri Majeerteen hal wasiir ayuu siiyay afar qof baana ka degta Somali galbeed. Dhulbahante oo kaga badan Somali galbeed wasiir xitaa lama siin. Jidwaaq oo xaafad ka degta Jig-jiga wuxuu ku taxay 3 wasiir.
ISAAQ u fiirso Muuse Biixi jufadiisa wuxuu u tuuray hal wasiir halka Ciise oo muddo mucaarad ahaa cadkoodii iyo kii Samaroonba loo qaybiyay Daaroodka kale.
Taas oo muujinaysa in guud DIR lagu cabay kuraasta wasiirada ”Hadaad tahay dadka yidhaa qabiilku macno male ee waxqabadkaa ka fiican taas laguma arag Mustafe Cagjar oo xitaa kheyraadka dalka looma sina ayuu qabaa Xuseen Warsame.
Tani waxay wax u dhimaysaa haddii Somali galbeed noqon lahayd bulsho wada socota ama yeelata hadaf ay uga tashan karto mustaqbalkeeda fog ama u yeelan lahayd maamul waxtar leh.